(Dhageyso);-Xiisad Siyaasadeed oo Ka Taagan Dagmada Cadaado iyo Go,aankii Lagu taageeray.. | AllJubbalandnews
(Dhageyso);-Xiisad Siyaasadeed oo Ka Taagan Dagmada Cadaado iyo Go,aankii Lagu taageeray..
Waxaa cirka isku sii shareereysa xiisada Siyaasadeed ee u dhaxeya hoggaanka sare ee madaxda maamulka Galmudug kadib Go’aankii uu xulufada Sacuudiga ku taageeray Madaxweyne Xaaf.
Shalay Madaxweyne Xaaf ayaa Diyaarad siday wax ay ku hakatay Magaalada Hargeysa kadib markii sida uu sheegay loo diiday in uu ku soo dego Garoonka Diyaaradaha Adan-Cadde, isla markaana markii uu Cadaado tegay uu sheegay in faragelin ay ku heeyso dowladda Soomaaliya .
Xarunta Madaxtooyada Galmudug ee Cadaado ayaa waxaa ka socda kulmo kala duwan waxaana haatan Cadaado ku wada sugan Madaxweyne Xaaf iyo ku xigeenkiisa iyaga oo aan weli kulmijn mudo ku dhawaad 24 Saacadood ay ku wada sugan yihiin Cadaado.
Magaalada Cadaado ayaa sidoo kale waxaa lagu arkayaa Gawaari ay ku xiran yihiin Cod baahiyaal kuwaas oo dadka uga digaya in ay soo dhaweeyaan Wafdi ka socda dowldda Soomaaliya hadii uu yimaado Magaalada Cadaado.
Hadana faah faahintii u dambeysay xiisada Siyaasadeed ee Magaalada Cadaado waxaana ka Wreysnayay Wariye Axmed Cabdi Salaan Khaliif oo Cadaado ku sugan.